Shina Abstract Metal Landscape Sarivongana midadasika eny ivelany miaraka amina orinasa mpamokatra endrika tsy manam-paharoa | Piedra
Toetran-javaboary any Abstract metaly goavana amin'ny sarivongana miavaka
Laharana modely: MLS32
Abstract Large Metal Landscape Sculpture dia napetraka ao amin'ny faritra misy ny varotra. Malalaka ity habaka lehibe ity ary ny sary sokitra vy any ivelany dia tsy maintsy ho lasa maso manintona fitambaran-tsokosoko eto. Isan'andro raha mandalo eo ny mponina dia mahasarika an'io zava-kanto vita amin'ny metaly ankehitriny io noho ny endrika mamirapiratra sy tsara tarehy. Tianao ve io famolavolana boribory voahodidina io, izay midika hoe ny fifangaroana. Safidintsika ny vy tsy misy fangarony 316 L tsara indrindra ho fitaovana lehibe izay azo zahana amin'ny rivotra na rano tsara ary koa mandritra ny androm-piainana lava. Minoa anay dia hahazo ny vokatra avo lenta ianao.
Anarana amin'ny zavatra Sarivongana vita amin'ny metaly ivelan'ny zaridaina
Item No. MLS32
Size Araka ny takiana
Tany amin'ny famaranana Ny fitaratra ary feheziny
endrika Sary sokitra boribory
Fe-potoana ara-barotra FOB CIF CFR
fonosana Tranga hazo matanjaka sy vy vy
Fanaraha-maso kalitao Izahay dia manana departemanta QC matihanina hanamarina ireo vokatra
Azonao atao koa ny mandinika ny tranobenay mba hizaha ilay kalitao
Ireo sary sokitra rehetra dia hojerentsika tsara alohan'ny fanaterana
Payment T / T, Western Union na namboarina
Ora nanomezana Vantany vao mahazo ny petra-bolanao izahay dia handamina ny fandefasana anao araka ny fandefasana voalohany indrindra
Famolavolana sary sokitra
316L Stainless vy
2M Tall na Andiana mpanjifa takiana, habe-piainana
Vata vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny plastika tsy misy rano ary misy sombin-javatra ao anatiny
Ny vokatra rehetra dia avy amin'ny famoronana kanto tany am-boalohany.
Ampiasao tsara sy fandokoana amin'ny laoniny ny fifehezana ny kalitao.
Amin'ny alàlan'ny teknolojia avo lenta imbetsaka ary avy eo mamirapiratra tokoa ny metaly.
Tena mety raha ampiasaina handravahana sy hanatsarana ny tranonao sy ny birao sns.
DSculpture ifferent Designs Ho an'ny safidinao
Manana endrika maro tsy azo aseho an'ity tranonkala ity izahay, koa raha liana amina sary sokitra hafa ianao dia aza misalasala mandefa hafatra aminay amin'ny famenoana ny takelaka eo amin'ny faran'ity pejy ity. Hamaly anao izahay ASAP ary hanome anao endrika hafa na mitovy amin'ny referansao.
Q: Ahoana no hataoko raha toa aho ka pm tsy afa-po amin'ny antsipiriany sasany?
A: Mandritra ny fivoaran'ny vokatra dia haka sary amin'ny antsipiriany izahay hanamarinana ny sary sokitra ary afaka manao fanitsiana izahay mandra-pahafapo anao amin'izany.
Q: Ahoana ny fomba fonosanao?
A: Misy fepetra vitsivitsy hiarovanay ny sary sokitra anao. Voalohany, momba ny ivelany dia hampiasa ilay fonosana kitay hazo mafy orina sy matihanina izahay. Faharoa, ao anaty fonosan'ny foza mba hiarovana tsara ny sary sokitra.
Q: Ianao ve manome serivisy fanamboarana manokana?
A: Ny serivisy serasera nataontsika vita dia misy ny endrika volavola, endrika, habe ary lokon'ny tarehy. Raha ny orinasa mivantana dia afaka manolotra serivisy feno anao izahay raha manana fangatahana.
Previous: Sarivongana voninkazo Abstract Landscaping sarivongana Fiberglass Lion Animal Statue
Manaraka: Volavola vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny tanindrazana namboarina tamin'ny rindrina Ortament tandindona
Zavakanto zava-kanto Abstract Mafana any ivelany.
Sarivongana metaly goavana any ivelany ...
Sary sokitra kanto bisikileta maoderina, ivelany ...
Fiberglass tsara tarehy trano volonosy marefo ...